नगरपालिकाको चरम अनियमितता : नवलपरासीबाट ल्याइएको बाख्रा अस्ट्रेलियन भन्दै बाँडियो - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
नगरपालिकाको चरम अनियमितता : नवलपरासीबाट ल्याइएको बाख्रा अस्ट्रेलियन भन्दै बाँडियो
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले अस्ट्रेलियाबाट ल्याएर बोयर जातको बाख्रा वितरण गरिएको दाबी गलत सिद्ध भएको छ । ९ दिनअघि नगरपालिकाले अस्ट्रेलियाबाट चार्टर गरी ल्याइएको दाबी गर्दै कृषक समूह तथा ब्यवसायिक फर्महरूलाई बोयर जातका बाख्राका पाठा–पाठी वितरण वितरण गरेको थियो ।
नगरपालिकाले अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको दाबी गर्दै ११ वटै वडामा ५२ वटा बोयर जातको बोका तथा ३८ वटा पाठी वितरण गरेको थियो । नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी स्वयमले एक करोड २५ लाख मूल्य खर्च गरेर ल्याइएको भन्दै किसानहरूलाई छिटो र बढी आर्थिक लाभ दिने भएकोले अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएको बताएका थिए ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले बोयर जातका बाख्राका पाठा अनुदानमा दिनका लागि कार्यविधिनै बनाएको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार बाख्रा खरिद गरेर निषेधाज्ञाको समयमा नगरपालिकाले समूह तथा फर्ममा लगेर नै पाठा–पाठी छोडिदिएको थियो ।
कम्पनीले अस्ट्रेलियाबाट नै ल्याइएको दाबी गरिरहँदा पशुसेवा विभागअन्तर्गतको आयात नियमन शाखाले अहिलेसम्म अस्ट्रेलियाबाट बोकापाठी नभित्रिएको जानकारी दिएको छ । विमानस्थलबाट मात्र नभएर छिमेकी मुलुक भारत वा चीन हुँदै पनि पशु आयात नगरिएको शाखा डेस्क अफिसर डा. मनोज शाही बताउँछन् ।
तर बोयर जातका बाख्रा अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएको नभई नेपालकै उत्पादन भएको सिद्ध भएको छ । एक करोड २४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको भनिएको बाख्राहरू नवलपरासीको केशर एग्रो फर्मबाट किनिएको पुष्टि भएको छ ।
कोरोना महामारीयता पशु आयातमा रोक लगाइँदा कसरी ल्याइयो अस्ट्रेलियाबाट बाख्रा ?
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले अस्ट्रेलियाबाट ल्याएर बोयर जातको बाख्रा वितरण गरिएको दाबी गल सिद्ध भएको छ । गत...
मंगलबार, जेठ १८ २०७८
नगरपालिकाले दुई पटक सम्म आयातकर्तालाई कागजपत्र पेश गर्न समयसीमा तोकिदिएको थियो । नगरपालिकाले दिएको समय सोमबार सकिँदासम्म कुनै कागजपत्र उपलब्ध नभएको बेलबारी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी महेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सर्वत्र आलोचना भएपछि सोमबार नै ठेक्का पाएको सङ्खुवासभाको ग्रो अर्गानिक कृषि फर्म र नगरपालिकाका पदाधिकारीबीचको आकस्मिक बैठक बस्दै छ । बैठकमा बाख्रा अस्ट्रेलियाबाट नभइ अन्यत्रबाट ल्याएको पुष्टि भएमा कारवाही हुने जानकारी दिए ।
बेलबारी नगरपालिकाको ‘बाख्रा काण्ड’, अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएको भनिएको बाख्रा बागलुङबाट !
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले अस्ट्रेलियाबाट ल्याएर वितरण गरिएको बोयर जातको बाख्रा बागलुङबाट ल्याइएको दाबी गरिएको छ...
स्रोतका अनुसार अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएको भनी प्रचार गरिएका बोका–पाठी नवलपरासीबाट ल्याइएको आयातकर्ता भनिएका श्याम पाण्डेले नै स्वीकार गरेका छन् । यसअघि भने पाण्डेले बाख्राहरू शुद्ध अस्ट्रेलियन भएको दाबी गरेका थिए । ग्रो अर्गानिक प्रालिका प्रतिनिधि पाण्डेले अस्ट्रेलियाबाट भारतको लखनउमा ल्यान्ड गरेर गाडीबाट नेपाल भित्र्याएको दाबी गरेका थिए । अस्ट्रेलियाको बोयर बाख्रा उत्पादन गर्ने सम्बन्धित कृषि फर्मबाट कागजपत्र झिकाउने र भन्सारसम्बन्धी कागजात पनि नगरपालिकामा पेश गर्नेसमेत उनको भनाई थियो ।
मेयर भन्छन् गलत सिद्ध भए कारवाही गर्छु
अस्ट्रेलियन शुद्ध जातका बोका पाठी नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि नगरपालिकाले पनि शुद्ध अस्ट्रेलियन बोयर जातका बाख्रा हुन् भनेर पुष्टि गरेको छैन । नगरप्रमुख सुवेदीका अनुसार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गत चैत ११ गते विद्युतीय खरिद प्रक्रियाबाट बोयर बोका–बाख्रा खरिद सम्बन्धमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम संखुवासभाको ग्रो अर्गानिक कृर्षि प्रालि छनोट भएको थियो ।
बेलबारी नगरपालिकाले बाँड्यो अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको बोयर जातको बाख्रा
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले अस्ट्रेलियाबाट ल्याएर किसानहरूलाई बोयर जातको बाख्रा वितरण गरेको छ । कोरोनाको महामारीकबीच नगरपालिकाले कृषक...
सो कम्पनीसँग ‘फुल ब्लड अस्ट्रेलियन’ बाख्रा ल्याउन एक करोड २४ लाख बराबरको सम्झौता गरिएको मेयर सुवेदीले जानकारी दिए । अस्ट्रेलियन बोयर जातका बोका–पाठी नभए सो कम्पनीलाई कारवाही गर्ने मेयर सुवेदीले बताएका छन् ।
पनि बेलबारी नगरपालिकाले हालसम्म उक्त कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको छैन । अब, उक्त कम्पनीले सम्झौता अनुसारको बाख्रा पुष्ट्याइ नभएमा र सम्झौताबमोजिम अन्य मापदण्ड पूरा नदेखिएमा कम्पनीको धरौटी जफत गरी कालो सूचीमा राख्दै ठेक्का रद्द गरी कानुन बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने सुवेदीले जानकारी दिए ।
कोरोना महामारीयता पुश आयात भएको छैन
उनका अनुसार प्रजाति विस्तार ब्रिडिङका लागि ल्याइ बोका–बाख्रा आयात गर्नुअघि त्यस विषयमा पशुसेवा विभागमा अनिवार्य जानकारी तथा सम्पूर्ण विवरण नै अग्रिम उपलब्ध हुनुपर्छ । कोभिड सुरु भएयता विगत झण्डै १ वर्ष यतानै अष्ट्रेलियाबाट बोकाबाख्रा नभित्रिएको उनको दाबी छ ।
यसरी ल्याइने बोकाबाख्राका विषयमा जन्मको मात्रै नभएर उनीहरूका तीन पुस्ते जानकारीसहितको विवरण नै अग्रिम उपलब्ध हुनुपर्ने प्रावधान रहेको शाहीले जानकारी दिए । शाहीका अनुसार आजका मितिसम्म अष्ट्रेलियाबाट करिब साँढे ४ सय बोयर बाख्राहरू मात्रै नेपाल भित्रिएका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, जेठ २४ २०७८ १६:२५:४८